Let's Angry - 𝖓𝖆𝖞𝖒𝖞𝖔.𝖈𝖔𝖒
Posted on September 7, 2015 May 14, 2019 by Nay Myo
TED.com က Kailash Satyarthi ရဲ့ How to make Peace ? ကိုဘာသာပြန်ထားတာပါ။ အောက်က video မှာ သူ့ရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
How to make peace? Get angry from J_J_O on Vimeo.